यस्तो पापी बाउ: छोरा बनाउन बुवाले छोरी बल*त्कार गर्दै भिडियो बनाउदै… भिडियो सहित – PathivaraOnline
Home > अपराध > यस्तो पापी बाउ: छोरा बनाउन बुवाले छोरी बल*त्कार गर्दै भिडियो बनाउदै… भिडियो सहित
यस्तो पापी बाउ: छोरा बनाउन बुवाले छोरी बल*त्कार गर्दै भिडियो बनाउदै… भिडियो सहित
admin July 16, 2019 July 16, 2019 अपराध, भिडियो 0
ए महिला तथा बल बालिका अधिकारकर्मी हो ? कता सुतिराछौ ? संचार र सुचनाको हकको नाममा के भै रहेछ यो ? बरिष्ठ पत्रकार ज्यूहरू, महिला संचारकर्मीहरू महिला तथा बाल मन्त्री र सम्बन्धित निकाय ? यी यस्ता बाल मनोबिज्ञान नबुझेका नपड़ेका २५/३० बर्षे हरिमुस्ले हरूले के गरी रहेछ किन गहिरिएर सोच्दैनौ ? किन गहिरिएर हेर्दैनौ? बालिका माथी यस्तो प्रश्न गर्ने अधिकार कस्ले र कुन निकायले दियो ? कानुनमा महिला वा बालिकाले रिपोर्ट गर्यो भने तुरून्त मुद्दा दर्ता हुने ।
सोधपूछमा महिला प्रहरी मात्र प्रयोग हुनु पर्ने र केवल अदालतमा त्यो पनि बचाउ पक्षको वकिलले त्यो पनि नानीको मनोबिज्ञान नखलबलिने गरी सोध्न पाउछ भनेर कत्ति लड़ियो र युनिसेफको सहयोगमा महिला सेल भिन्दै खड़ा पनि भै सकेको छ । ति आफू अनुहार लुकाएर नानीको पुरै शरिर र अनुहारै देखाएर यसरी भिडीओ बनाउनेलाई तुरून्त कारवाही गराउनु पर्ने होइन ? पत्रकारिताको धर्म के हो ?
महिला तथा बालिका को नाम र ठेगाना बताउन नमिल्ने नियम छ तर यो के हो ? र एउटा बलात्कार भएकी युवतीको सारा परिवारलाई मानसिक बलत्कार गर्ने अधिकार कस्ले दियो यी हरिमुस्ले हरूलाई । यी केटाहरू आफै भिडीओ हेर्न उत्साहित मनोस्तिथीको देखिन्छ । अपराधीलाई कानुनले पक्री सके पछि यो परिवारलाई यसरी पिड़ा र मानसिक यातना दिनु रोक्नु पर्छ कि पर्दैन ??कृपाय समन्धित निकाय सबैको ध्यान जाओस ।
यात्रुले खचाखच भरीएको बस दुर्घटनाग्रस्त!
विवाहको ३ वर्ष सम्म किन भएन भारतीको सन्तान ? यस्तो रहेछ कारण (भिडियो हेर्नुस्)
३ करोड नेपालीको लागि खुसिको खबर :- यी हुन् महान नेपाली महिला जसले बनाइन् क्यान्सर निको पार्ने घरेलु औषधी – भिडियो हेर्नुहोस